ဗိုက္ဆာလို႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လာေတာင္းစားတဲ႕ သူေတာင္းစားကို ဘုန္းႀကီးက အုပ္ခဲပုံေ႐ႊ႔ခိုင္းလိုက္ေသာအခါ... - MM Live News
May 4, 2020 MM Live News အေထြေထြဗဟုသုတ 0
တစ်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကို လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး စားစရာ လာတောင်းစားတယ်။ အဲ့မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့တိုးတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဆီမှာ စားစရာတောင်းတယ်။
ဆရာတော်က ဆွမ်းစားဆောင်ရှေ့ကအုတ်ပုံကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး “ဒကာတော် အဲ့ဒီအုတ်ပုံကို ဆွမ်းစားဆောင်နောက် အရင်ရွေ့ပေးပါအုန်း” လို့ မိန့်တော်မူတယ်။ အဲ့တော့ လက်ပြတ် သူတောင်းစားက ဘုန်းကြီးကို မကျေမနပ်နဲ့ ပြောပါတယ်။
“အရှင်ဘုရား တပည့်တော်မှာ လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအုပ်ပုံကိုရွေ့နိုင်မှာလဲ အရှင်ဘုရား ဆွမ်းကျန်ဟင်းကျန်လေးတောင် မစွန့်ပေးချင်လဲနေပါ။ တပည့်တော် တစ်ခြားမှာပဲ သွားတောင်းစားတော့မယ်” လို့ပြောရော ဘုန်းကြီးက ဘာမှပြန်မပြောဘူး။
အုတ်ပုံဆီ လျှောက်သွားပြီး လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ အုတ်ခဲကို မ ပြီး ဆွမ်းစားဆောင် နောက်မှာသွားချတယ် ပြီးတော့မှ လေသံအေးအေးနဲ့ ပြောတာ “ဒီလိုအလုပ်မျိုးက လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့လဲ လုပ်လို့ရတယ်”။
လက်တစ်ဖက်ပြတ် သူတောင်းစားလည်း ဗိုက်ကဆာ စားသောက်စရာလဲ လိုချင်တာနဲ့ ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါလေရော လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ အုတ်ခဲတွေ တစ်ခဲချင်း တစ်ခဲချင်းစီ ဆွမ်းစားဆောင်နောက်ကို သယ်သွားချလိုက်တာ အချိန်အတော်လေးလဲကြာရော အုတ်ခဲပုံတစ်ပုံလုံး ကျောင်းအနောက် ရောက်သွားပါလေရော။
အဲ့ဒီနောက် ဘုန်းကြီးလဲ ထမင်းဟင်းတွေကို ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ပြီး ကျွေးလိုက်တယ်။သူတောင်းစား ထမင်းစားပြီးတော့ ဘုန်းကြီးက ပိုက်ဆံတချို့ ထုတ်ပေးတယ်။ သူတောင်းစားလည်း ပိုက်ဆံတွေရတော့ အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ်။
ဒါနဲ့ “ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘုရား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရှင်ဘုရား” နဲ့ ထိုင်ရှိခိုးရော။ ဘုန်းကြီးကပြောတာ “ဘုန်းဘုန်းကို ကျေးဇူးတင်စရာ မလိုပါဘူး ဒကာတော် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေဟာ ဒကာတော်ရဲ့ အားအင်အစွမ်းအစကနေ လာတဲ့ပိုက်ဆံတွေပဲလေ” တဲ့။
သူတောင်းစားဟာ သူရဲ့အစွမ်းအစကနေ ရတဲ့ငွေအတွက် အရမ်းကြည်နူးပီတိ ဖြစ်မိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။“တပည့်တော် အမြဲမှတ်သားထားပါ့မယ် ဘုရား” ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးကို ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ကန်တော့ပြီး ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
နောက်ထပ် လေးငါးရက်လောက် ထပ်ကြာတော့ နောက်ထပ် သူတောင်းစားတစ်ယောက်က ကျောင်းမှာလာပြီး ဆွမ်းကျန်ထမင်းကျန် ထပ်လာ တောင်းစားတယ်။ “ဘုန်းကြီးလည်း သူတောင်းစားကို ဆွမ်းစားဆောင်နောက် ခေါ်သွားပြီး အုတ်ပုံကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး ဒီအုတ်ပုံကို ဆွမ်းစာဆောင်အရှေ့ အရင်ရွေ့ပေးပါအုန်း လို့ပြောတယ်”။
ဒါပေမဲ့ ခြေလက်အကောင်းနဲ့ အဲ့ဒီသူတောင်းစားဟာ ဘုန်းကြီးခိုင်းတာကို စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ “ဆွမ်းကျန်လေး တောင်းစားတာတောင် မကျွေးချင်ဘူး။ လူကိုများ ဟိုခိုင်းလိုက် ဒီခိုင်းလိုက်နဲ့” လို့ မကျေမနပ်နဲ့ပြောပြီး ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။
ကျောင်းထဲကသံဃာတွေ အဲ့တာတွေကိုမြင်တော့ ဘုန်းကြီးကို ဝိုင်းမေးကြတယ်။ “အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက အရှင်ဘုရားက ဟိုသူတောင်းစားကို ဒီအုတ်ပုံကြီး ဆွမ်းစားဆောင်နောက် ရွေ့ခိုင်းတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အဲ့ဒီလူဟာ အရင်တုန်းက ဘုန်းကြီး အုတ်ပုံရွေ့ဖို့ခိုင်းလိုက်တဲ့ လက်တစ်ဖက်ပြတ်နဲ့ သူတောင်းစားပါပဲ။
သူဟာ ဘုန်းကြီးနဲ့ဆုံတွေ့ ခွင့် ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သူ့ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ သူရဲ့တန်ဖိုးကို သိရှိနားလည်သွားခဲ့ပြီး သူနဲ့ သင့်တော်လျောက်ပတ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြေအနေ ကောင်းမွန်မြင့်တက် လာစေနိုင်ခဲ့တော့တာပါပဲ။
(မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်၊ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကို ကိုယ်သိတတ်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်ခြင်းဟာ လူဖြစ်ခြင်းရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအခြေခံ အကြောင်းအရင်းပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်) လွပ်လပ်မှု့ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာ ရွေးချယ်မလားဆိုတာ မူတည်သွားတာပါ။
“မ”ဖ်က္ရင္ ျပည္ပ်က္မယ္ဆိုတဲ့စကား ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မိန္႔ၾကား…
MM LIVE NEWS provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://mmlivenews.com/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.
ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေဝဒနာရွင္မ်ားအျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းလိုပါက ေငြမကုန္ပဲလြယ္ကူစြာ ေပ်ာက္ကင္းေသာနည္းေလး
ျခင္ေဆးအတြက္ ပိုက္ဆံကုန္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး….ဒီေန႔ကစျပီး စမ္းၾကည့္ရေအာင္ေနာ္ …
ေသြးတိုးလို႔ စိတ္မညစ္နဲ႔ေတာ့ဗ်ာ….ဒီပံုထဲကလူျကီးကို ေက်းဇဴးတင္တယ္…
ခရီးသြားမ်ား သတိထားရမည့္ ရန္ကုန္ မႏၲေလးအျမန္လမ္း ( သို႔မဟုတ္) ၃၆၆ မိုင္ ၃ ဖာလုံ
ခါးေတြအရမ္းနာျပီး ေခါင္းေတြလဲတအားကိုက္ရင္ေတာ့ ဒီးေဆးနည္းေလး လုပ္ၾကည့္ပါ…